Mofomamy Mafanan’ny Hazofijaliana, Fombandrazana Ao Karaiba Rehefa Andro Paka · Global Voices teny Malagasy
Mofomamy Mafanan'ny Hazofijaliana, Fombandrazana Ao Karaiba Rehefa Andro Paka
Voadika ny 08 Avrily 2016 2:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 日本語, Ελληνικά, English
Mofomamy Mafanan'ny Hazofjaliana. Sary an'i Sarah Horrigan, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC 2.0.
Isaky ny Paka, ny ao Karaiba — toy ireo tany hafa rehetra ao anatin'ny Commonwealth ary betsaka Katolika — dia mifaly amin'ny fombandrazana ankafizin-dry zareo, amin'ny fihinanana ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana. Ity fomba fanao malaza ity dia mofokely nosesehana voaloboka ary nasiana sarinà tanambokovoko tamin'ny glasy eo amboniny. Mihinana azy ireny rehefa Zoma Masina, ireo Kristiana mankalaza ny fanomboana sy ny fahafatesan'i Kristy, ary manamarika indrindra ny fiafaràn'ny Karemy nifadiana hanina sy fandàvana.
Nandritry ny taona maro, marobe ireo bilaogera any amin'ny faritra, mpanoratra momba ny sakafo , no nandefa ireo fomba fikarakaràna ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana, saingy ho an'i Simply Trini Cooking, namoha fahatsiarovana mivaivay ilay fomba fanao, fahatsiarovana ilay “fiaran'ny mofo” teny amin'ny manodidina azy :
Manaitra anay milaza ny fahatongavany ny feon'anjomara efa mahazatra, ary efa tsy andrin'ny ankizy tsirairay ny hahita izay entin'ilay ‘lehilahin'ny mofo’ eny antampon'ny fiarany Suzuki Carry. Vantany vao misokatra ny varavarana amin'ny ilan'ny fiara, manintona ny oronay ny fofon'ny hanitra amin'ireo mofo vao avy nahandroina. Nisy hatrany ny mofokely voasesika voankazo mamy, mofokely misy voanio. mofomamy misy vanio, ‘tartes, mofo dibera, biskoitra (indraindray), mofo nasiana ‘houblon’ ary amin'ny Herinandro Masina dia ny Mofomamy Mafanan'ny Hazofijaliana.
Ah! afaka hihinana mofomamy mafanan'ny hazofijaliana aho izao. Ilay sosona mafimafy ao anatiny iny mivadika ho atiny mandomando, malefaka, izay mahatonga ny fankafizanao ho bebe koa, saingy avy eo tara loatra satria efa lasa lavitra ilay “fiaran'ny mofo”. Noho izany, na iaretanao eo ny tsy fisiany, na mitadidy ny hividy roa na telo rehefa tonga indray ilay fiara amin'ny manaraka.
Alohan'ny hizaràny ny fikarakaràna, resahan’ilay bilaogera ny momba ny tantaran'ny fombandrazana manodidina ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana:
Efa taonjato maro tany aloha no niandohan'ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana. Marobe ireo Kristianina amin'ìizao fotoana izao no mandray azy io ho fakàna tàhaka ny mofo tsy misy masirasira nohanina nandritry ny Paka. Kanefa, tondroin'ny hafa ho niandoha tany amin'ny vanimpotoanan'ny Ejiptiana sy ny Grika izy io, izay nanana ihany koa mofokely natokany ho an'ny fanompoany ara-pinoana sy fiderany ireo andriamanitr'izy ireo.
Ny endriky ny mofo ho an'ireo Ejiptiana sy Grika dia fanehoana ny endriky ny volana. Na izany aza, ny Romàna dia nino fa endrika nanehoana ny dingana efatra na ny fizaram-potoanan'ny volana ilay tanambokovoko. Taty aoriana, naverin'ny Fiangonana Kristiana nomena ny endriky ny fanomboana teo ambony hazofijaliana ilay tanambokovoko natao tamin'ny glasy.
Nitombo ny lazan'ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana rehefa natombok'ilay mopera antsoina hoe Thomas Rockcliffe ny fomba fanao amin'ny fizaràna ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana ho an'ireo mahantra tao St. Albans, Angeletera, tamin'ny 1361. Ho an'ny Preotestana dia fomba Katolika io ary nezahany ny hanàkana ilay fomba fanao.
Kanefa, vao mainka nihamafy kokoa ilay fomba fanao rehefa nandàny lalàna iray i Elizabeth I nanome alàlana ireo mpanao mofo hivarotra azy ireny rehefa fotoanan'ny fetiben'ny Paka sy ny Noely irery ihany. Araka izany, hatramin'ny 1733, nanana ny hira natao ho azy manokana ilay mofomamy mafanan'ny hazofjaliana, izay afaka ny ho renao eny an'arabe antsain'ireo mpivarotra amoron-dàlana mivarotra azy ireny: ‘Mofomamy mafanan'ny hazofijaliana! mofomamy mafanan'ny hazofijaliana! denaria iray, denaria iray ny roa, mofomamy mafanan'ny hazofijaliana.’
Mametraka ny dian-tànany manokana amin'ity fomba fanao ity ry zareo ao Karaiba. Ny Jamaican Blogs manamarika hoe “ampahany goavana amin'ny kolontsaina Jamaikàna ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana, tahàka ireo sakafo marobe hafa misolo tena azy, toy ny trondro masira sy ny ‘ackee‘”:
Efa hatrany amin'ny Babilona fahiny no niaingan'ilay fotokevitra, fony nanolorana ireo mofomamin'ny hazofijaliana ho an'i Ishtar, ilay sampy mpanjakavavin'ny lanitra ho azy ireo.
Nanao mofomamy mitovitovy tamin'io ny Grika fahiny mba hanomezana voninahitra ny volana.
Tonga hatrany Angletera ilay fomba fanao, izay ihinana ny mofomamin'ny hazofijaliana rehefa Zoma Masina, miaraka amin'ilay hazofijaliana maneho ny fanomboana an'i Jesosy/Jesoa.
Rehefa nambabo an'i Jamaika ny Britanika, mazava loatra fa nentiny nanaraka tany ny fomba amam-panaon'ny nosiny.
Rehefa nandeha ny fotoana dia naka ny toeran'ilay fomba fanao Jamaikàna ny fomba fanao Anglisy momba ilay mofomamin'ny hazofijaliana, miaraka aminà fanovàna lehibe sasantsasany.
Ny tao Jamaika dia nampiasàna ny ‘mélasse/ranon-tsiramamy’, raha ny avy any Angletera kosa nampiasàna ny tantely.
Tao Jamaika, hanina miaraka amin'ny fromazy ilay mofomamy, fifangaroana izay lasa nifàka lalina tamin'ny kolontsain'ilay nosy.
Nihalefy ny fomba amam-panao Britanika rehefa tonga ny fotoana ihinanana ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana amin'ny fifadiankanina ny Zoma Masina, saingy hatramin'izao dia mbola mitoetra be ao Jamaika ilay fomba fanao.
Jamaikàna kokoa no ahalalàna ilay fomba fanao amin'ìzao fotoana izao fa tsy Britanika loatra. Ary ankehitriny, fomba fanao mandavantaona ny fihinanana fromazy, raha rehefa fialantsasatry ny Paka kosa no tena manjaka ny fihinanana mofokely sy fromazy miaraka.
Ny fahandroana (sy fihinanana!) ny mofomamy mafanan'ny hazofijaliana rehefa Zoma Masina dia velona ary tena manerana an'i Karaiba sy ireo any am-pielezana — jereo amin'ity lahatsary Youtube ity ny dingana tsirairay arahana raha hanao ny mofokelinao miendrika mofomamy mafanan'ny hazofijaliana avy any Karaiba ianao:
Mbola mihira ilay hira foana ve ianao? Mihinàna dia ankafizo e!
5 andro izayDominika